Mpanamboatra manokana ny sombin-tsarimihetsika matevina matevina Die Casting Zinc Alloy. Ny vokatra dia misy fanodinana maty aliminioma & zinc. Ny famonoana maty Aluminium dia misy amin'ny alloys ao anatin'izany ny 380 & 383. Ny famaritana dia misy fandeferana plus / - 0.0025 ary lanjan'ny famolavolana 10 lbs. Ny casting zinc die dia misy amin'ny alloys mahazatra toy ny Zamak no. 3, Zamak no. 5 & ​​Zamak No. 7 & firavaka hybrid toy ny ZA-8 & ZA-27. Ny famaritana dia misy fandeferana plus / - 0.001 ary lanjan'ny famolavolana 4.5 lbs.
Milina famolavolana alim-bolo vita amin'ny alim-bary vita amin'ny alim-bolongana 100W
Zinc Alloy Die-Casting Ary bobongolo manao Mobile Phone Enclosure